Ady amin'ny Browser: Mitohy hatrany ny famoizan'ny Internet Explorer an'i Firefox, inona ny Safari? | Martech Zone
Ady amin'ny Browser: Mitohy hatrany ny famoizan'ny Internet Explorer an'i Firefox, inona ny Safari?
Alakamisy, Aogositra 23, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Kitiho ny tabilao hahitanao ny habeny feno. Ireo mpitety tranonkala roa hijerena maso dia Internet Explorer sy Firefox. Midina ny fidirana an-tsokosoko Internet Explorer ary toa mihena ny anjaran'ny Internet Explorer 7 ambany Firefox!
Tsy nisy fiatraikany akory ny Safari, na dia eo aza ny fiezahana hiditra amin'ny tsenan'ny Windows. Angamba anisan'ny olan'ny Safari ny olana momba ny fiarovana eo no ho eo sy mahamenatra izay sarona tao anatin'ny adiny 2 taorian'ny nisintomany an'i Lar Holm.
RNH, ny olana amin'ny Internet Explorer dia noho ny antony roa ihany:
The Ekipan'ny Internet Explorer mitohy tsy fahalalana ny CSS fenitra. Na dia mety ho toy izany aza ny isan-jaton'ny mponina kely dia ny olona no tena manadino azy ireo - ny mpamorona.
Mety ho toa mankahala Internet Explorer aho, nefa tena ampiasako isan'andro. Toa mahomby izy io ary, rehefa ampiharina ny hacks amin'ny pejy, tsara ny fandikana ireo pejy ireo. Mitolona hatrany amin'ny fampiasana ny fampiharana aho, raha vantany vao manandrana mampiasa menio aho. Ny fipetrahan'ny menus ankavanana ho fihomehezana dia lesoka lehibe. Topazo maso ny rindranasa rehetra ary apetraka ankavia ny menus rehetra fa tsy ny havanana.
Vao haingana aho no nametraka ny Vista tamin'ny ny zanako lahy, Bill's, PC miantsoantso vaovao ary mila milaza aminao aho fa mahavariana ny interface, indrindra amin'ny Aero effets mandeha. Bill dia afaka nametraka Office 2007 ho an'ny sekoly ary tiako ny rafi-menio takelaka. Mety mila fotoana kely aho vao hahitako hoe aiza ny zava-drehetra - saingy hatreto, ny endri-javatra tsirairay dia miorina am-pahavitrihana miaraka amin'ireo sary mahafinaritra izay maneho tsara ny hetsika.
Noho ireo fanatsarana ny fanandramana ny mpampiasa sy ny fampiasana azo ampiasaina amin'ny vokatra Microsoft fototra dia gaga aho fa ny ekipan'ny Internet Explorer dia tsy niantso antso vonjy.
Aza mihaino ahy, na izany aza… jereo fotsiny ny statistika.
Manorata ny Startpage anao manokana miaraka amin'ny Google Apps
GoDaddy dia milaza fa fanitsakitsahana marika momba ny marika Go-Daddy novidiana avy amin'ny GoDaddy
23 Aogositra 2007 amin'ny 11:14 PM
Inona ny statisty aseho amin'ny sary? Ny tranonkalanao ve izany? Tranokala statistika?
Aug 24, 2007 amin'ny 12: 15 AM
Inona no loharanon'ity data ity?
Aug 24, 2007 amin'ny 1: 13 AM
Vao tsy ela akory izay no namakiako ny hevitr'i Lifehacker fa ny statistikan'ny w3schools dia tsy dia tsara satria mifantoka amin'ny olona manao famolavolana tranonkala izy ireo - izay taha ambony noho ny demografika hafa.
Tsy mbola nihady tao anatiny.
Dean @ Mangidihidy Teknika
Aug 24, 2007 amin'ny 2: 59 AM
Reko koa io fanehoan-kevitra io momba ny famolavolana tranonkala. Izaho manokana dia mampiasa Firefox na dia indraindray aza IE tsy azo ihodivirana, indrindra rehefa manomboka mampiasa vokatra Microsoft mifototra amin'ny Internet toa ny SharePoint ianao.
Aug 24, 2007 amin'ny 3: 32 AM
Misaotra anao tamin'ny bilaoginao mahafinaritra.
Tiako ho fantatra hoe avy aiza io staty io satria ny Mozilla Foundation vao nilaza herinandro vitsivitsy lasa izay fa manantena ny hanana 30% amin'ny 2008 (jona) izy ireo.
Aug 24, 2007 amin'ny 7: 45 AM
Ireo statistika ireo dia avy W3Schools. Miala tsiny fa tsy nanana izany tamin'ny lahatsoratra aho! Nanavao ny lahatsoratra niaraka taminy aho androany maraina.
Aug 24, 2007 amin'ny 10: 38 AM
Mandra-pahatongan'ireo statistika ireo hifanaraka amin'ny tranonkala amin'ny ankapobeny, dia tsy dia misy dikany firy izany. Azonao atao ihany koa ny mamoaka ny statistikan'ny mpizara.
Aug 24, 2007 amin'ny 9: 41 AM
Manaitra ny mahita an'ity tabilao ity rehefa mieritreritra ianao fa maro ny tranonkala mbola TSY mifanaraka amin'ny Firefox. Amin'ny maha-mpampiasa Firefox lava ahy, mampiala ahy ahy izany.
24 Aogositra 2007 amin'ny 6:50 PM
Mpankahala IE6 efa hatry ny ela ny fanarahan-dalàna tsy CSS, Gaga aho fa nahita ny tsy fahafahan'ny IE7 misambotra, na eo aza ny zava-misy fa nanao asa mendrika i Microsoft mba hahazoana antoka fa voavaha ireo bitsika rehetra. Izany, ampiarahina amin'ny hoe ny IE7 dia tokony hatosika amin'ireo mpampiasa Windows amin'ny alàlan'ny Update, heverinao fa nidina an-tsokosoko ny IE6 (ary tamin'izay dia niditra an-tsokosoko IE7).
Chris Schmitt dia nanoratra lahatsoratra fohy fohy momba ny fahasamihafana misy amin'ireo mpitety roa avy amin'ny fomba fijery izay nojereko tao amin'ny bilaogiko Eto.
27 Aogositra 2007 amin'ny 7:31 PM
Raha liana ianao dia nanampy a araho izany amin'ny zavatra hita miavaka sasany mifototra amin'ny hevitry ny mpamaky.
Sep 1, 2007 ao amin'ny 1: PM PM
Mahaliana fa ny fatiantoka anjaran'ny IE6 dia mandika mivantana ny fitomboan'ny fizarana IE7 .. tokony hovakiantsika ve izany midika fa ny fitomboan'ny Firefox dia avy amin'ireo mpampiasa IE taloha? Mety ho ara-dalàna raha toa ny Firefox ka mahazo mpampiasa IE efa antitra hitsambikina kokoa noho ny mpampiasa mahatoky maro izay efa nandeha tamin'ny lalan'ny fanavaozana ny IE4-5-6-7…